Video: Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin's Wedding Preparation - Part 1 | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin's Wedding Preparation - Part 1
Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin's Pre-Wedding Preparation Interview Video.
Video from MRTV- 4
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် Sedona Hotel မှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပမယ့် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေကို MRTV -4မှ တင်ဆက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ Download Mp4 Video!!! (Right Click on the Link and Save Link As)
min naingJanuary 3, 2011 at 10:51 PMလုပ်ကြပါ......ရှင် တို့က ရဲတွေပဲ........ReplyDeletekokoJanuary 3, 2011 at 11:36 PMI feel something inside my internal somewhere of my heart...May both of you happy and live together until your last breath...ReplyDeletemayminnnyoJanuary 4, 2011 at 5:32 AMသြ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေကြတာများမဟုတ်တာတွေဇာချဲ့ ။ပြီးရင်အိမ်ကဈေးဖိုးတွေ အခွေဝယ်ကြဦးမှာပါလား။အခု ကုန်မယ့် ငွေတွေတခါတည်း ဖေါင်ဒေးရှင်းကိုထည့် လိုက်ပါလားကွယ်နတ်လူသာဓုခေါ်မှာပါ။ငွေရင်းပြီးငွေပွားအောင်လုပ်စရာမလိုတော့ ဘူးပေါ့ခက်တာက နာမည်ကလည်ကြီးချင်သေးသကိုး၊ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလုပ်ပြီးရင်တော့ ကြာကြာရှည်ရှည်ပေါင်းကြပေါ့ နော။ReplyDeleteAUNGJanuary 5, 2011 at 9:45 AMIF U R RICH N CELEBRATES , U WILL DO LIKE THIS .ReplyDeletelimkJanuary 7, 2011 at 9:34 PMသောက်စကားလဲ၇ှည်လိုက်တာ ဖာ နေလိုက်တာလွန်းးေ၇ာ လုပ်ကြပါ ၇ှင်တို့ခေတ်ဘဲ. ငတ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ ကူညီကြမယ် မကြံဘူး ဟွန်း စိတ်ပိန်တယ်နော် .. ကြားမှာဝင်၇ှည်နေတာကို ကြည့်မလိုမ၇တော့ဘူး ဟွန်းReplyDeleteAdd commentLoad more...